DAAWO MUUQAAL: Midowga Yurub oo Qabtay Markab Turkiga Iyo Xiisad ka Dhalatay Hanjabaad Turkiga Ugu Danbeysey - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO MUUQAAL: Midowga Yurub oo Qabtay Markab Turkiga Iyo Xiisad ka Dhalatay Hanjabaad Turkiga Ugu Danbeysey
November 24, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Howlgal ay sameeyeen ciidamada badda ee Jarmalka ayaa ku qabtay markab laga leeyahay dalka Turkiga badda Mediterranean-ka maalintii Axada iyagoo ka shakiyay inuu ku xadgudbayo cunaqabateynta hubka ee saaran Libya. 15 Saacadood oo Baadhitaan Ku Socdey Markabka , Ankara waxay amartay in la joojiyo howlgalka, iyadoo laga hor istaagay shaqaalaha Jarmalka inay dhameystiraan baaritaankooda, sida ay sheegeen saraakiisha Jarmalka.
Dhacdadan ayaa dhalisay jawaab celin ka timid Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga, oo bayaan ay soo saartay Isniinta ku tilmaamtay baaritaanka mid “sharci darro ah,” taasoo sii xumeyneysa xiriirka EU-da Turkiga xilli xiriirka labada dhinac uu isha ku hayo ka hor shir muhiim ah oo Golaha Yurub uu yeelanayo 10-ka Diseembar. dowladaha xubnaha ka ah ayaa la filayaa inay dib u eegaan cunaqabateynta suuragalka ah ee saaran Ankara.
Ciidamada Jarmalka ee howlgalka EU Irina, howlgalka lagu joojinayo hubka sharci darrada ah ee lagu wareejinayo Libya, markab xamuul oo uu leeyahay calanka Turkiga oo lagu magacaabo Rosaline-A oo maraya badda Mediterranean-ka qiyaastii 200 kiiloomitir (124 mayl) waqooyiga magaalada Benghazi ee Libya.
Isagoo Isniintii kula hadlayey Berlin wariyeyaasha, Afhayeenka Wasaaradda Difaaca Jarmalka Christian Thiels ayaa beeniyay sheegashada Aksoy, isagoo sheegay in shaqaalaha markabka ay wada shaqeyn leeyihiin oo aysan diidin baaritaanka. Wuxuu sheegay in Ankara aysan ku soo jawaabin afar saacadood gudahood markii la helay ogeysiiska baaritaanka, taas oo loo arko ogolaansho maldahan kormeerayaasha.
“Shaqaalahu gebi ahaanba way wada shaqeyn jireen,” ayuu yiri Thiels. “Turkiga markii dambe wuxuu cadeeyay inuusan ogoleyn hoyga. Ka dibna hoyga ayaa isla markiiba la joojiyay. Taasi waa nidaamka caadiga ah.
Dhacdadan ayaa calaamadeysay iska horimaadkii labaad ee sanadkan dhexmara Turkiga iyo ciidamada badda ee isbahaysiga NATO oo kormeeraya hubka loo wareejinayo Libya, halkaas oo Ankara ay taageerto dowladda fadhigeedu yahay Tripoli ee Heshiiska Qaranka ee dagaal sokeeye oo socda. Bishii Juun, markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa in ay dhibaateeyeen seddex markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga markii uu isku dayay in uu kormeero markab xamuul oo watay calanka Tanzania oo ay galbinayeen bariga Mediterranean. NATO ayaa tan iyo markii ay bilowday baaritaanka dhacdada.